FISOLOKIANA AO AMIN’NY FACEBOOK : Sarona ireo teti-dratsy goavana vitan’i Prudence
Mirongatra, mahazo vahana tanteraka ireo karazana fisolokiana amin’ny alalan’ny fangatahana fanampiana ao amin’ny “facebook” amin’izao fotoana. 26 novembre 2020
Fikambanana iray antsoina hoe "Divine Madagascar", pejy Facebook "Vonjy ho an’ny hafa", mpanao asa soa sy manampy ireny zaza tsy salama mila fitsaboana any ivelany ireny no nametraka fitoriana tao amin’ny Sampana mpikaroka ny heloka bevava an’ny Zandarimariam-pirenena Antananarivo etsy Fiadanana, manoloana ny fisolokiana avo lenta nataon’i Maman’i Iavotiana na i Prudence.
Raha tsiahivina hatrany am-boalohany ny raharaha dia nolazainy fa tsy salama io zanany io, ka nanangonany fanampiana am-pitaka tamin’ny tambazotran-tserasera “Facebook”. Ny 11 novambra taona 2018 no nanomboka namitaka ny fikambanana voalaza etsy ambony izy ary niangavy fanampiana fa marary mafy mila fandidiana haingana any Frantsa i Iavotiana zanany, niaraka tamin’ ireo taratasy hosoka maro. Nanampy tokoa ary ity fikambanana ity ka nanao fanehoana na “publication” tao amin’ny pejiny. Maro ireo olona nahita izany, nangoraka sy nandray anjara nandrotsaka vola tany aminy mivantana avy hatrany. Hatramin’ny Fitondram-panjakana aza nikarakara ny antontan-taratasy rehetra hanafainganana ny fandehanan’izy ireo tany Frantsa. Ny 06 mey taona 2019 i Iavotiana sy ny reniny no tonga tany Frantsa, niaraka tamin’ireo taratasy rehetra mikasika ny ho fandidiana sy fitsaboana azy dia ny "tétralogie de falot". Nanomboka teo no nampiahiahy ny tompon’andraikitra satria raha nozahana i Iavotiana, ny 07 mey 2019, dia salama tsara tsy misy maninona akory ny fony ary nalefa niverina fotsiny teto Madagasikara. Ny 16 jolay 2019 dia tonga taty an-tanindrazana izy ireo. Taty aoriana anefa dia mbola nitohy ihany ny fisolokiana goavana nataony satria mbola nanao "publication" hafa indray koa manambara fa mbola mila fanampiana, miaraka amin’ny taratasy valim-pitiliana hosoka.
Ny besinimaro moa tsy nahafantatra fa nangoraka ka dia mbola nandrotsa-bola ihany. Nandritra ny famotorana lalina àry dia fantatra fa hosoka daholo ireo taratasim-pahasalamana nampiasainy mba hanampian’ny fikambanana "Divine Madagascar" azy. Tapitra novainy daholo koa ny taratasim-pahasalamana nomen’ny dokotera malagasy nentiny nambabo ny fikambanana. Nandray an-tanana ny raharaha moa ny zandary, vaky bantsilana taty aoriana ny tena marina rehetra. Niaiky ny heloka vitany ity farany. Natolotra ny Fampanoavana ny faha 23 novambra 2020 teo ary naiditra am-ponja eny Antanimora.